Nkọwa nke ọhụrụ 3 "Asus Zenbook 12,5 na" ezi uche yiri "na 12" MacBook | Esi m mac
Nkọwa nke ọhụrụ 3 "Asus Zenbook 12,5 na" ezi uche yiri "na 12" MacBook
Jordi Gimenez | | MacBook, ọtụtụ
Ihe mbụ m ga - achọ ikwu na ọ bụ otu ọmarịcha otu egwuregwu ma ọ bụ otu ụdị ahụ ma ọ bụ otu m siri hụ n'isiokwu a "Ezi uche yiri" na Apple si 12 ″ MacBook mee ya otu n’ime akụrụngwa kachasị mma n’ahịa. N'ịkọwapụta nke a ma gosipụta ihe yiri nke ahụ na imewe ahụ, anyị ga-ahụ ụfọdụ nkọwa nke Asus Zenbook 3 nke a gosipụtara n'oge na-adịbeghị anya.
Maka ndị na-amaghị, a na-eji ụdị Asus Zenbook mara ụdị nke ngwa ngwa yana iji aka ya wee mepụta akara ahụ, ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ụdị dịka Asus UX21 dị ka Macbook Ikuku mana na nke a ọhụrụ nlereanya anyị nwere ike ikwu na ha anọgideghị na ha ngwaahịa akara nae ulo oru ozugbo idetuo ìhè na ultrathin Apple MacBook.
2 Mkpisiaka mmetụta
Ihe ha ka mma karịa Apple MacBook nke ekwesịrị ịdepụta abụwo na ahịa maka ihe karịrị otu afọ, bụ na ha jisiri ike ịgbakwunye oke oke nke naanị 11.9 millimeters na ibu ibu nke 910 gram, Intel isi i5 na Intel Core i7 processors. Na mgbakwunye na nke a, enwere ụdị nsụgharị SSD dị iche iche, nke sitere na 256 GB, site na 500 GB wee kwụsị na 1 TB.
Banyere RAM nke kọmputa anyị nwere ike ikwu na ọ nwere nsụgharị abụọ dị, nke nwere obere 4GB RAM, nke m chere na ọ dị ụkọ taa na ụdị dị ike karị gụnyere 16 GB. Anyị aghọtaghị mkpebi ahụ ị gaghị etinye ma ọ dịkarịa ala otu ụdị nke nwere 8 GB nke RAM na ọ bụ na na kọmputa ndị a ọ gaghị ekwe omume ịgbasa ebe nchekwa na oge, yabụ ọ dị ka ezigbo nsogbu.
Na ihuenyo nke akụrụngwa a, anyị nwere ike ịsị na na ilele anya mbụ ya nwere obere etiti (dị ka MacBook) nakwa na ọ na-abịa na iko Gorilla Glass 4 nke ga-echekwa ihuenyo 12,5-inch ya.
Asus na-atụ anya asịrị banyere akpọghe kọmputa na tinye ihe mkpisiaka mkpịsị aka gị trackpad. Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị maka onye ọrụ ahụ yana m chere na MacBook Pro ọhụrụ nwere ike ịgbakwunye nhọrọ a iji banye, mana ọnọdụ dị na Asus a adịghị ka ọ kachasị mma nye m na nke Apple ma ọ bụrụ na ọ gbakwunye enwere m obi abụọ na ọ bụ na trackpad. Na nke a Asus nhọrọ nke akara ukwu ga-abawanye na ojiji nke ọrụ dị na Windows, Windows Ndewo.
Ọ bụrụ na iche. Asus a yiri Apple MacBook nke na ọ nwere naanị ọdụ ụgbọ mmiri n'akụkụ. Obi abụọ adịghị ya, ọ dị ka ihe a ga-eburu n'uche ebe ọ bụ na mgbe ha malitere MacBook ọhụrụ ọtụtụ mgbasa ozi na ndị ọrụ malitere mwakpo ahụ site na Apple, ugbu a ọ dị ka Zenbook 3 a na-agbaso ụzọ ahụ ma ga-adọta ndị nkwụnye.
Ma na nke a, enwere "mana" na m chọrọ ịmetụta, nnwere onwe nke Apple MacBook na-enye dị elu ma n'agbanyeghị eziokwu ahụ na Asus na-emesi obi ike na Zenbook 3 a na-ewe 9 awa na-enweghị ibu, nke a ga-abụrịrị hụrụ na processor i5 ma ọ bụ i7 na zuru ikike. Na-eche na naanị ịnwe ọdụ ụgbọ USB C na-egbochi ikike onye ọrụ na-akwụ ụgwọ mgbe ị na-arụ ọrụ na akụkụ ndị ọzọ ejikọrọ, yabụ, nke a bụ maka m bụ isi na Asus ọhụrụ a. Ọ dị mma, ọ na-ebu ngwa ngwa ma anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ọkara batrị na nkeji 40, mana njedebe na nke a nke otu ọdụ ụgbọ mmiri dị njọ karịa nke MacBook.
Nke a bụ vidiyo nke Asus Zenbook 3 ohuru:
O doro anya na ọ bụ ezigbo igwe ma ọnụahịa ya karịrị ihe ọtụtụ tụrụ anya ya. Na nke a, ọ ga-dokwara anya na isi version nke a na laptọọpụ bụ 999 dollar na nhazi: Intel Core i5, 4 GB nke RAM na SSD bụ 256 GB. Maka ndị chọrọ ihe ọzọ, ha nwere ụdị $ 1.999 nke na-enye anyị processor Intel Core i7 na 16 GB nke LPDDR3 RAM na 1 TB nke diski SSD. Anyị nwekwara ike belata SSD nke ụdị kachasị ike nke 500 GB wee nọrọ na ya dị ọnụ $ 1.499.
N'okwu m, echere m na ọ bụrụ na m ga-ahọrọ n'etiti Asus na Windows na MacBook, ị maara nhọrọ niile.. Mana ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ịnwe i5 na i7 processors (na enweghị ịmara ma ọ bụrụ na ha bụ usoro Skylake ma ọ bụ na ọ bụghị) Achọpụtara m na ọ na-atọ ụtọ maka ndị ọrụ ahụ chọrọ ike a. Na ngosi nke otu a na Tuesday gara aga ụlọ ọrụ ahụ siri ọnwụ na ya ga-atụnyere onwe ya nke ukwuu na MacBook ma n'ezie imewe ahụ bụ otu mana echiche ndị ọzọ n'echiche m enweghị atụnyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Nkọwa nke ọhụrụ 3 "Asus Zenbook 12,5 na" ezi uche yiri "na 12" MacBook
Ọ ga-adị nnọọ ka ọ dị aesthetics mana ebe siri ike nke MAC anyị bụ os. Kpamkpam enweghị atụ na ụbọchị.
I chefuru ikwu na ọdụ ụgbọ mmiri nke Asus Zenbook 3 bụ Thunderbolt 3, ihe Apple na-enweghị ike itinye na Macbook ya.
Zaghachi Jeff Dunham
Apple weputara iTunes 12.4.1 Site na nje nsogbu